Kulankii Amniga Dalka looga doodayey oo uu Golaha Shacabku yeelanayo maanta – Kalfadhi
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankiisii 4-aad ee Kalfadhiga 5-aad ku yeelanaya Xarunta Golaha ee magaalada Muqdisho. Kulanka maanta waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa arrinta amniga Soomaaliya, gaar ahaan tan Muqdisho, oo si loo adkeeyo ay dowladdu joojisay inta badan dhaqdhaqaaqii gaadiidka caasimadda.
Kulankan kii ka horeeyey ee 3-aad waxa uu ku furmay 164 Xildhibaan 6-dii bishan, laakiin waa uu fashilmay oo ma shaqeyn, kadib markii ay xildhibaannadu isaga horyimaadeen iney doodda kulankaas saxaafaddu tabiso iyo ineysan tabin. Hase ahaatee, murankaas waxaa maalin dambe lagu xaliyey iney saxaafaddu tabiso kulanka maanta oo looga hadalayo isla amnigii lagu fashilmay in looga hadlo kulankii ka horeeyey.
Xildhibaanno fara badan ayaa u haraadan iney laamaha amniga wax ka weydiiyaan xaaladda amaan ee dalka oo ka sii xumaaneysa sidii ay ahayd, kadib markii todobaadyo hore, inta aysan dowladdu xiran inta badan wadooyinka Muqdisho, ay ka dhaceen caasimadda qaraxyo is xig-xigay, taas oo ay xildhibaanno badan ku eedeynayaan xukuumaddu iney ka seexatay ka hortagiddooda.
Kulkankan kii ka horeeyey ee fashimay waxaa joogay Wasiirka Amniga iyo Taliyayaasha Ciidanka Militariga, Booliska iyo Asluubta, oo u soo diyaar-garoobay iney ka jawaabaan su’aalaha Golaha. Laakiin, xildhibaanno golaha ka tirsan ayaa sheegayey iney, sidoo kale, dalbadeen inuu horyimaado hogaanka NISA, taas oo aan dhicin todobaadkii hore, balse lama hubo inuu maanta hor imaanayo golaha.
Inkasta oo uu Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabku baahiyey inuu jiro kulanka maanta ee Xildhibaannada Golaha, haddana lama hubo 100% inuu dhacayo kulankaas, sababtoo a waxa uu horay u soo baaqday 2 maalin oo ka mid ah todobaadkii hore. Laakiin, waxaa hadda ku sii qulqulaya gudaha Xarunta Golaha Shacabka warbaahinta gudaha, si ay u soo tabiyaan kulankaas xasaasiga ah.
Kulanka Golaha Shacabka oo goordhaw furmay iyada oo uusan joogin masuul amni